ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၄)ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« ထူးခြားသော သာသနာ့အာဇာနည်တစ်ပါး
# အကယ်ဒမီ ရင်ခုန်သံ »
# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၄)Published January 24, 2010 | By dr.tin bo bo	ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာကို ရေးလာတာ ဘာလိုလိုနဲ့ အပိုင်း(၄)ကို ရောက်လာပါပြီ။ ဖတ်တဲ့လူတွေတော့ ငြီးငွေ့နေကြပြီလား မသိပါဘူး။ တစ်ချို့တွေ ငြီးငွေ့ကောင်း ငြီးငွေ့နိုင်ပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ အလွန် စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော် ဖတ်ရှု နေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းလေးကတော့ အပိုင်း (၃)မှာ မပြောလိုက်ရတဲ့ “ဣသာမစ္ဆရိယ” အကြောင်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
စဉ်းစားကြည့်ကြနော်။ လူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ “ကိလေသာ” လို့ခေါ်တဲ့ “စိတ်အညစ်အကြေး” တွေဟာ အရေအတွက်နဲ့ တွက်ကြည့်ရင် (၁၅၀၀) လောက် ရှိပါတယ်။ “လောဘ၊ ဒေါသ၊ တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ . . . စတဲ့ (၁၅၀၀ ကိလေသာဆိုတဲ့) အကုသိုလ် အညစ်အကြေးတွေ အများကြီး ရှိပါရက်နဲ့ လူတွေ ဒုက္ခရောက်ကြောင်း၊ ဆင်းရဲကြောင်းဟာ ဒီ “ဣသာ နဲ့ မစ္ဆရိယ” ဆိုတဲ့တရား (၂)ပါးသာလျှင် အဓိက တရားခံ ဖြစ်နေပါသတဲ့။ တခြား အကုသိုလ်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာ ထက် ဒီတရားနှစ်ခု ကြောင့် ဖြစ်ရတာက ပိုများလှပါသတဲ့။
စာရေးသူ ဒီစကား ဟုတ်မဟုတ်ကို ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားခြင်းတွေ နဲ့ မိတ်ဆွေရင်းတွေကို လိုက်ပြီး လေ့လာ ကြည့်လိုက်တော့ အတော်လေးကို မှန်လှပါတယ်။
သူများတွေတော့ မပြောလိုပါဘူး။ ကိုယ့် ဆွေမျိုးမောင်နှမသားချင်းတွေထဲကို အရင်လေ့လာကြည့်တော့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အမြဲတန်း ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဆွေမျိုး၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေဟာ “ဣသာမစ္ဆရိယ” အများဆုံးသူတွေ ဖြစ်နေတာကို သွားတွေ့ ရလိုက်ပါတယ်။ တစိမ်းမဟုတ်တဲ့ ကိုယ့်မောင်နှမ အရင်းခေါက်ခေါက်၊ ဆွေမျိုး အရင်းခေါက်ခေါက် ကောင်းစားတာ တောင်မှ ဘယ်လိုမှ “မရှုစိမ့်” နိုင်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
စာရေးသူ အပိုင်း (၂) နဲ့ (၃)မှာ ရေးထားတဲ့ “လောဘတရား” ဟာ မကောင်းပေမယ့် “လောဘ”ကမှ “အရ” ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။ လောဘကြောင့် ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ရာထူးအာဏာတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့ စိတ်ထား စင်ကြယ်မှု၊ မစင်ကြယ်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရပြီးကာမှ ပြန်ပျက်စီးသွားရတာမျိုး ရှိတတ်သေးတယ်။
“ဣသာမစ္ဆရိယ”သမားကျတော့ “အရ” ဆိုတာကို မရှိတော့ဘူး။ သူတို့ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲဆင်းရဲ ကြပ်တည်း ဒုက္ခမျိုးစုံ ရောက်ပြီးရင်း ရောက်နေတော့တာပါဘဲ။ “လောဘ” က ပစ္စည်းဥစ္စာကို ရပြီးခါမှ ပြန်ပျက်စီးတယ်။ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ကျတော့ ပစ္စည်းဥစ္စာကို လုံးဝ ၀င်မလာအောင်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးထားတတ်ပါတယ်။
“ဣသာမစ္ဆရိယ” တရားဟာ လောဘထက် သိမ်မွေ့တယ်။ မသိသာဘူး။ “လောဘ”က “ကောက်ရိုးမီးလို” ဟုန်းကနဲ တောက်တတ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပေမယ့် “ဣသာမစ္ဆရိယ” ကျတော့ “ဖွဲမီးလို” တစ်ငွေ့ငွေ့ လောင်ကျွမ်းနေတတ်တဲ့ သဘော ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ သဏ္ဍန်မှာ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ရှိမှန်း/မရှိမှန်း သိဖို့ နဲနဲ ခက်ပါတယ် ။ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပြန် စောင့်ကြည့် နေတဲ့ “၀ိပဿနာ” အမြင်မျိုး လုံးဝမရှိသူတွေဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ သဏ္ဍန်မှာ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ရှိ/မရှိကို လုံးဝ မသိကြ ပါဘူး။
လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် “ဣသာမစ္ဆရိယ” တရားဟာ လူတစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး အဆင့်အတန်းခြင်း သိပ်ကွာခြားနေလွန်းရင်လည်း ဖြစ်ခဲပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကိုယ်နဲ့ အဆင့်တူ၊ ဘ၀တူ၊ အခြေအနေတူ (မတိမ်းမယိမ်း) လောက်မှာ ဖြစ်လေ့ ရှိတတ် ကြပါတယ်။
ဥပမာ – လခစားဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ အလုပ်ပိုင်ရှင်သူဌေးကြီးအပေါ်မှာ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ဖြစ်ဖို့ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ သူနဲ့ အဆင့်ခြင်းမှ မတူတာ။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ ရာထူးတူတဲ့ အပေါင်းအသင်းတစ်ယောက် ရာထူး တက်သွားပြီး သူက မတက်ဘူး ဆိုရင်တော့ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် “ဣသာမစ္ဆရိယ”တရားဟာ အလုပ်တူ၊ ရာထူးတူ၊ အဆင့်တူ၊ စီးပွားတူ၊ ဘ၀အဆင့်အတန်းခြင်း တူတဲ့ အခြေအနေတွေ မှာ သူက ကိုယ့်ထက်သာသွားတဲ့ အချိန်မှာ အများဆုံး ဖြစ်တတ်တာ ကို သတိပြုပါ။
ဒီနေရာမှာ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ “တူကလေး” တစ်ယောက် အကြောင်းပြောရဦးမယ်။ သူက Web ဒီဇိုင်းနာ လုပ်တယ်။ ပညာအရမ်းတော်တယ်။ စိတ်ကူးကောင်းတယ်။ (ပါရမီပေါ့)။ ဒါနဲ့ သူ အလုပ်စ, ၀င်စမှာ အလုပ်ထဲက သူတွေက သူ့ကို ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြတယ်။ သူ့ရုပ်ကလေးကလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေ။ ဒါနဲ့ အလုပ်က အရမ်းတော်တော့ သူဌေးက တဖြည်းဖြည်း မျက်နှာသာပေးလာတယ်။ နောက်တော့ ရာထူးပါ တိုးပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ အရင်တုန်းက ခေါ်ခေါ် ပြောပြော လုပ်နေတဲ့ “အလုပ်တူ” ၀န်ထမ်းတွေက သူ့ကို စကားမပြောကြတော့ဘူးတဲ့။ အခေါ်အပြော မလုပ်ကြတော့ဘူးတဲ့။ “ဣသာမစ္ဆရိယ” စိတ်များနော်။ ဒီစိတ်ကြောင့် လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ခင်နေရာကနေ ချက်ခြင်း မုန်းတီး သွားရတာ။ သူတို့ ဒီလို စိတ်ထားလေလေ၊ သူတို့ဘ၀က မတိုးတက် လေလေ ဖြစ်ရတော့မှာ။ မသိကြဘူးနော်။ တော်တော် သံဝေဂရဖို့ ကောင်းလှ ပါတယ်။
စီးပွားရေးသမားတွေလည်း ကိုယ်နဲ့ အလုပ်တူ ပြိုင်ဖက်တွေအပေါ်မှာ “ဣသာမစ္ဆရိယ” အမြဲလိုလို ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပြိုင်ဆိုင်မှု ကြီးလေ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ကြီးလေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါမေပယ့် ဒီလို “ဣသာမစ္ဆရိယ”စိတ် ကြီးစွာ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကြလေ ဘယ်သူမှ မနိုင်ဘဲ အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရ လေလေပါဘဲ။ “ဣသာမစ္ဆရိယ”ဟာ လာဘ်လာဘကို အင်မတန် ပိတ်ပင်တတ်တဲ့ တရားပါ။ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ချစ်လှစွာသော ညီမငယ်၊ သမီးငယ်များတို့။ ဒီ “ဣသာမစ္ဆရိယ” တရားဟာ ယောင်္ကျားတွေထက် မိန်းမသား တွေမှာ ပိုပြီး ဖြစ်တတ်ပါတယ် တဲ့။ ဘုရားပြောတဲ့ စကားပါနော် ။ ပုံဆောင်ပြီး ပြောပြပါမယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူလာတော့ ဘုရားနဲ့အတူ ဘ၀အဆက်ဆက်က ပါရမီဖြည့်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ “ဧတဒဂ်” လို့ခေါ်တဲ့ “ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး” တွေ ပေးအပ်ခံရပါတယ်။ “အရှင်သာရိပုတ္တရာ” ပညာအရာမှာ ဧတဒဂ် ရပါတယ်။ “အရှင် မောဂ္ဂလန်” ဆိုရင် တန်ခိုးအရာမှာ ဧတဒဂ် ရပါတယ်။ “အရှင်ပုည” ဆိုရင် ဓမ္မကထိကအရာမှာ ဧတဒဂ် ရပါတယ်။ ဒီလို ရှေးဘ၀က ဆုတောင်းနဲ့ ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ ပါရမီတွေကြောင့် ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာ “ဧတဒဂ်” ရသူ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ရဟန်းပုဂ္ဂိုဟ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အဲဒီ အထဲမှာ ဗုဒ္ဓအရှင်ရဲ့ ညီဝမ်းကွဲဖြစ်တဲ့ “အရှင်အနုရုဒ္ဓာ” ကိုယ်တော်ကြီးကတော့ “ဒိဗ္ဗစက္ခု” အရာမှာ “ဧတဒဂ်” ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ “အရှင် အနုရုဒ္ဓာ” ကိုယ်တော်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ “ဒိဗ္ဗစက္ခု” တန်ခိုး နဲ့ လောက(၃)ပါးလုံးကို အဖုံးအကွယ်မရှိ အကုန် မြင်နိုင်တဲ့ တန်ခိုးရှိသူဖြစ်လေတော့ မကြာခဏဆိုသလို (၃၁)ဘုံအတွင်းကို “ဒိဗ္ဗစက္ခု” နဲ့ လျှောက်ပြီး ကြည့်လေ့ရှိပါသတဲ့။
အဲဒီလို လျှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ “အရှင် အနုရုဒ္ဓာ” ကိုယ်တော်ကြီးခမျာ သိကြားမင်း ခေါင်းစားသလို ခေါင်းစားစရာ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ “ငရဲဘုံ(၈)ထပ်” ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တိုင်း လူတန်းစား အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ကို တွေ့မြင်ရတယ် ဆိုပေမယ့် “ယောင်္ကျား နဲ့ မိန်းမ” အရေအတွက်ခြင်း ယှဉ်လိုက်ရင် “မိန်းမတွေ ငရဲခံနေရတာ” သိသိ သာသာ များလွန်းနေပါသတဲ့။
ဒီမှာ ကိုယ်တော်ကြီး တော်တော် ခေါင်းစားသွားပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့် ?။
လူ့ပြည်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ် လုပ်ကြတာလည်း ဒီ အမျိုးသမီးတွေပါဘဲ။ သံဃာတွေအတွက် မနက်မလင်းခင် ဆွမ်းထချက် တာလည်း ဒီ အမျိုးသမီးတွေပါဘဲ။ ပြီးရင် သံဃာတွေ တန်းစီကြွ လာလို့ ဆွမ်းလောင်းကြရင်လည်း ဒီ အမျိုးသမီးတွေပါဘဲ။ အိမ်က ဘုရားစင်မှာ နေ့စဉ် ဆွမ်း/ရေချမ်းကပ်လှူပြီး ဘုရားရှိခိုး အမျှဝေတာလည်း ဒီ အမျိုးသမီးတွေပါဘဲ။ တရားပွဲတွေများ ရှိရင် ရှေ့ဆုံးက ရောက်ကြတာလည်း ဒီ အမျိုးသမီးတွေ ပါဘဲ။ ယောင်္ကျားတွေကတော့ ဘယ်ပျောက်နေမှန်းတောင် မသိပါဘူး။ (ဘီယာဆိုင် တို့၊ ကာရာအိုကေ တို့၊ အနှိပ်ခန်း တို့မှာ ရောက်နေကြပုံ ရပါတယ် / . . . . . . . ရယ်စရာပြောတာပါနော်)
ဒီလို ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ကြတာ များပါလျှက်နဲ့ “ငရဲပြည်” မှာ ဘာလို့ မိန်းမအရေအတွက်က ဒီလောက်များနေရတာလဲ?။ အရှင် အနုရုဒ္ဓါကိုယ်တော်ကြီး တော်တော် ဦးနှောက်ခြောက်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဘုရားထံမှာ လျှောက်ထား မေးမြန်း ကြည့်ဦးမှပါလေ ဆိုပြီး ဘုရားဆီကို သွားပြီး မေးရတော့တယ်။
တိုတိုပြောရရင် ဘုရားက သိကြားကို ပြောလိုက်သလိုပါဘဲ။ “အေး- ငါ့ရှင် အနုရုဒ္ဓါ ရေ၊ မိန်းမတွေဟာ ကုသိုလ်အရေးမှာ ရှေ့တန်းက ပြုလုပ်ကြတာ မှန်ပေမယ့် မနာလိုခြင်း၊ ၀န်တိုခြင်း ဆိုတဲ့ “ဣသာမစ္ဆရိယ” တရားတွေကတော့ ယောင်္ကျား တွေထက် ပိုများနေလို့ ငရဲပြည်မှာ မိန်းမများနေရတာပါကွာ” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါသတဲ့ ။
(ဒါ – ကျွန်တော့်စကား မဟုတ်ဘူးနော်၊ ဘုရားစကားပါ၊ တော်ကြာ ကိုယ့်ကို အမြဲအားပေးနေတဲ့ အမျိုးသမီး ပရိတ်သတ် အင်အားလျော့သွားမှာ စိုးရတယ်/အခုဖတ်နေတဲ့ ဆရာ့ညီမ၊ ဆရာ့သမီး ကတော့ ဒီအထဲမှာ မပါပါဘူး၊ တခြား အမျိုးသမီး တွေကို ပြောတာနော်/ ဟုတ်ပြီလား)
ယောင်္ကျားတွေလည်း “ဣသာမစ္ဆရိယ” ရှိကြပါ့ဗျား။ တစ်ချို့ဆိုရင် ယောင်္ကျားရင့်မကြီးတွေ ဖြစ်ရက်နဲ့ မိန်းမတွေထက်တောင် “ဣသာမစ္ဆရိယ” သာသေးတယ်။ မနာလို ၀န်တိုမှု ပိုများသေးတယ်။ တွေ့ဘူးတာ ပြောတာပါ။
“ဣသာမစ္ဆရိယ” တရား(၂)ပါးမှာ “မနာလိုခြင်း” ဆိုတဲ့ တရားကို မပြောလိုပေမယ့် “၀န်တိုခြင်း” ဆိုတဲ့ တရားလေး ကတော့ မိန်းမတွေမှာ ပိုများတဲ့အကြောင်းကို ဥပမာလေး တစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ “မနာလိုခြင်း” ကတော့ ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမ သိပ်မကွာလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် “၀န်တိုခြင်း၊ နှမြောတွန့်တိုခြင်း” အရာမှာတော့ မိန်းမတွေက နဲနဲသာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်တွေနဲ့ ဥပမာ ပေးပါမယ် ။ အိမ်ထောင်တစ်ခုရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ကိုယ့်အိမ်မှာ မကင်းရာ မကင်းကြောင်း ယောင်္ကျား နဲ့ မိန်းမရဲ့ ဆွေမျိုးညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ လာရောက် စားသောက်နေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာ ယောင်္ကျားဘက်က အမျိုးတွေက ပိုများသလား ? မိန်းမဘက်က အမျိုးတွေက ပိုများသလား ? ဒါလေးဘဲ ဖြေကြည့်ကြပါ။
ကိုယ့်အမျိုးကို ထောက်ပံ့ချင်တဲ့အခါမှာ မိန်းမက ယောင်္ကျားမျက်နှာကို ကြည့်ရတာ ပိုများသလား? ယောင်္ကျားက မိန်းမ မျက်နှာကြည့်ရတာ ပိုများသလား ? ။ ယောင်္ကျားက တွန့်တိုတာ ပိုများသလား? ၊ မိန်းမက တွန့်တိုတာ ပိုများသလား?။ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကိုယ့်မိဘတွေကို ပေးကမ်းထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာ ယောင်္ကျားတွေက ပိုပြီး လွယ်ကူသလား? မိန်းမတွေက ပိုပြီး လွယ်ကူသလား? ။ မေးကြည့်တာပါနော်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ ဖြေကြည့် ကြပေတော့။ အမှန်အတိုင်းလေးပေါ့။
အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ အချိန်မှာလည်း မိန်းကလေးတွေဟာ ယောင်္ကျားလေးတွေထက်စာရင် အချင်းချင်း အလွန်ပြိုင်ဆိုင်လို စိတ် များတတ်ကြတယ်။ မိဘဂုဏ်ခြင်းပြိုင်တယ်။ ရုပ်ရည် အလှအပခြင်းပြိုင်တယ်၊ အ၀တ်အစားခြင်း ပြိုင်တယ်၊ ပညာခြင်း ပြိုင်တယ်၊ ရည်းစားချင်း ပြိုင်တယ်၊ အိမ်ထောင်ကျလာတော့ လင်ခြင်း ပြိုင်ကြပြန်တယ်။ ပြီးရင် သားသမီးခြင်း ပြိုင်ကြပြန်တယ်။
ဒီလို ပြိုင်ဆိုင်ကြတော့ နိုင်တဲ့သူ၊ သာတဲ့ သူက “မာနတရား” ဖြစ်လာတယ်။ ရှုံးတဲ့သူ၊ နိမ့်တဲ့သူက “ဣသာမစ္ဆရိယ” ဖြစ်လာတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်သူမှ မနိုင်ပါဘူး။ “မာန” ရော “ဣသာမစ္ဆရိယ” ရော ကိုယ့်ကို “ဆွဲချမယ့်” တရားတွေ ချည်းပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီ “ဣသာမစ္ဆရိယ” တရားကြောင့် ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေဟာ “ကုသိုလ် တစ်ပဲ ၊ ငရဲ တစ်ပိသာ” ဆိုတာလို ဖြစ်သွားပြီး အခုဘ၀လည်း မကောင်း/နောင်ဘ၀လည်း မကောင်း ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ “ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ” တစ်ခု အဖြစ် လောဘကို ပယ်သတ်ပြီးကြရင် “ဣသာမစ္ဆရိယ” ကိုလည်း ဆက်ပြီး ပယ်သတ်ကြပါဦး။ (အမြဲတမ်း ရှိနေတဲ့ တရားမဟုတ်ပေမယ့် အထက်က ပြောခဲ့သလို အကြောင်း တိုက်ဆိုင်ရင် ဒီ “ဣသာမစ္ဆရိယ” စိတ်ဟာ ၀င်လာတတ်ပါတယ်)
ဒီလို ပယ်သတ်နိုင်ပါမှ အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို ဖြောင့်ဖြောင့် တန်းတန်း / ရှည်ရှည်ကြာကြာ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ခဏမျှသာ ကောင်းစားပြီး ဒုံရင်း ဒုံရင်း ကိုဘဲ ပြန်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီ ကောင်းကျိုးလုံးဝမပြုတဲ့ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ကို ဘယ်လိုပယ်သတ်ကြမလဲ ? ။ သိပ်မခက်ပါဘူး။ “မုဒိတာ” ဆိုတဲ့ တရားနဲ့ ပယ်သတ်လိုက်ပါ။ “မုဒိတာ” ဆိုတာ သူများကောင်းစားတာကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ရှိတာပါ။ သြော် သူတို့ရဲ့ အတိတ်ကံ က ကောင်းလှချည်လား? ဆိုပြီး သူတို့နဲ့ ထပ်တူ ၀မ်းမြောက်ခြင်းပါ။ မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးမျိုးပါ။ မရှိသေးရင် မွေးယူကြပါ။ အင်မတန် ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ မဟုတ်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ပြီး ကောင်းစားနေသူတွေလည်း ရှိနိုင်တော့ သူတို့ကျတော့ မုဒိတာပွား မရဘဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်လိမ့်မယ် ။ ဒါမျိုးကျတော့ “ဥပက္ခာ” ပြုလိုက်ပါ။ သြော် သူတို့ “အကုသိုလ်” ကို မကြောက်မရွံ့ လုပ်နေ ကြပါလား။ တစ်ဘ၀ တစ်နပ်စာအတွက် သံသရာမှာ ခါးစည်းခံကြရတော့မှာပါလား လို့ သနားစိတ်ဝင်ပြီး “ဥပက္ခာ” ပြုလိုက်ပါ။ သူတို့တရား သူတို့ စီရင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ကြားထဲက၀င်ပြီး ခေါင်းမခံချင်ပါနဲ့။
အမှန်တော့ “ဣသာမစ္ဆရိယ” စိတ်ဟာ “လောဘတရား” ရဲ့ လက်အောက်ခံတရားမို့ ကိုယ့် သဏ္ဍန်မှာ လောဘစိတ် တကယ်နည်းလာရင် “ဣသာမစ္ဆရိယ” စိတ်လည်း နည်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဆိုးဝါးတဲ့ “ဣသာမစ္ဆရိယ” စိတ်ကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် ခံယူချက်ကလေး တစ်ခုကို ကျင့်သုံးလိုက်ရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ခံယူချက်ကတော့ ရှေ့ပိုင်း ဆောင်းပါးတွေမှာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ “ပါရမီ” ဆိုတဲ့ တရားလေးကို နားလည်ဖို့ပါဘဲ။
လူတွေရဲ့ ဘ၀သံသရာဟာ ရှည်လျားလွန်းလှတာကြောင့် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ပါရမီ ဖြည့်ခဲ့ပုံခြင်း မတူနိုင်ပါဘူး။ အလုပ်ခြင်း၊ ရာထူးခြင်းလည်းတူ ၊ ကြိုးစားမှုလည်း တူပါရက်နဲ့ သူက ကိုယ့်ထက် သာသွားတာဟာ – သူဟာ ကိုယ့်ထက် ဘ၀ အဆက်ဆက်က ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ “ပါရမီ” တွေ သာလွန်ခဲ့လို့သာ ဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ရပါမယ်။ သြော် သူ့ပါရမီက သိပ်ကောင်းပါလားဆိုပြီး ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ မုဒိတာ ပွားလိုက်ပါ။
ဒေ၀ဒတ်ဟာ ဘုရားလို ပါရမီမျိုးကိုတော့ မဖြည့်ကျင့်ခဲ့ဘဲ ဒီဘ၀ရောက်မှ ဘုရားကို အားကျပြီး ဘုရားဖြစ်ချင် တာကြောင့် “ဣသာမစ္ဆရိယ” စိတ်နဲ့ မကောင်းမှုအမျိုးမျိုး ကြံစည်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဘုရားတော့ မဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ မြေမြိုပြီး မဟာအ၀ီစိ ကိုသာ သက်ဆင်း သွားရရှာပါတယ်။ ပါရမီခြင်းက ဘယ်လိုမှ တုယှဉ်လို့ မရဘူးလေ။ အရင်ဘ၀တွေတုန်းက ပါရမီ ဖြည့်ကျင့် တာမျိုး မလုပ်ခဲ့ဘဲ ဒီတစ်ဘ၀ထဲနဲ့ သွားယှဉ်လို့ မရပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ထက် ကောင်းစားသွားရင် ကိုယ့်ထက် ပါရမီ ကောင်းခဲ့လို့ဘဲလို့သာ ခံယူလိုက်ပြီး “မုဒိတာ” သာ ပွားပေးလိုက် တာဟာ “အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ ဘ၀တစ်ခု” ရရှိဖို့ အရေးပါလှတဲ့ စိတ်ထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မွေးမြူကြပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ သဏ္ဍန်မှာ “ဣသာမစ္ဆရိယ” စိတ်များ ၀င်လာရင် ချက်ခြင်း ဖယ်ထုတ်ပစ်ကြပါ။ “မုဒိတာ” နဲ့ ချက်ခြင်း အစားထိုးကြပါ။
ဒါဟာ “ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ” ရဲ့ အရေးပါတဲ့ ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး Life Style တစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျင့်သုံးကြည့်ကြပါ။ အကျိုးထူးခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ကဗျာလေးတစ်ခု ထည့်ပေးလိုက်ပါဦးမယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အမျိုးသမီးတွေမှာ “ဣသာမစ္ဆရိယ” စိတ်များတတ်တယ် ဆိုတာ ဘုရားစကားကို ကိုးကားပြီး သတိထားမိအောင် ပြောပြခြင်းသာဖြစ်ပြီး ထိခိုက်နစ်နာစေလိုသော စိတ်မရှိရိုး အမှန်ပါ။ ယောင်္ကျားတွေ လိုက်မမှီနိုင် လောက် အောင် အင်မတန် စိတ်ထားမြင့်မြတ်လှတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ အများကြီး တွေ့ဘူး ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကိုယ်လည်း ပါနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ လို့။
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged Best Life Style, ဗုဒ္ဓ ဒဿန, ဘ၀ ဒဿန, ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ, ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံး ယတြာ . . အပိုင်း (၄), အတွေးအမြင်	44 comments on “# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၄)”	Zaw Min Tun on January 24, 2010 at 8:29 pm said:
အသိတွေအများကြီးတိုးပွား ရပါတယ်ဆရာ၊ သတိလဲထားမိလာပါတယ်၊ ဆရာ့ရဲ့ဆိုဒ်က လူသားကောင်းကျိုး
တွေအတွက် ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ယှဉ်ပီး တင်ပြပေးလို့ အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ ဆိုဒ်ကြီးဖစ်ပါတယ်ဆရာ။
ဥပသကာ on January 24, 2010 at 9:38 pm said:
happy on January 24, 2010 at 10:10 pm said:
သတိထားပီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေရသွားပါတယ်..
ငရဲမှာ မိန်းမတွေများနေတယ်ဆိုတော့ ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်လုံးပြုးပီး ဟေလို့တောင် အသံထွက်မိတယ်။ နောက်ဖြေရှင်းပြတော့မှ .. တရေးရေး မြင်ယောင်လာရင်း ပြုံးမိတယ်။
TUN TUN OO on January 24, 2010 at 10:13 pm said:
Moe Thaike on January 25, 2010 at 1:50 am said:
mdy on January 25, 2010 at 3:59 am said:
ဆရာ..တကယ်အကျိုးရှိတဲ့ဆောင်းပါးပါ။နေ့ စဉ်ဘာအသစ်တင်မလဲလို့ အမြဲစောင့် ဖတ်နေတဲ့ ပရိသတ်ပါ။အခုလိုမျှဝေတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ။စကားမစပ်ဒီအစိမ်းရောင်လေးဘဲကြိုက်တယ်ဆရာ။
red rose on January 25, 2010 at 4:07 am said:
ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာတွေကို ဆရာ တတ်နိုင်သလောက် အများကြီးရေးသွားပါ…ရေးသမျှတိုင်းက အသိတရားရဘို့ကြီးဘဲ ဆိုတော့ ဖတ်ရသူတွေအတွက် တကယ်တန်ဖိုးရှိပြီး တကယ်ကောင်းပါတယ်
Zaw Min Tun on January 25, 2010 at 7:43 am said:
waing on January 25, 2010 at 7:54 am said:
thank alot saya.
miley on January 25, 2010 at 9:00 am said:
ဆရာရေ အရမ်းတန်ဘိုးရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ
aungbarsay on January 25, 2010 at 10:04 am said:
i am one of your followers , i mostly read your website .now, you are become my teacher , but , today i want to remind you not to miss the point about the “yatayar” the topic now you are writing. it is very helpful , i am afraid you will miss the point because of your long long massages,[every day i open the computer ,the first page i read is yours ] thank you very much,,,
နွေနှင်း on January 25, 2010 at 10:24 am said:
ငရဲပြည်မှာ မိန်းမတွေများနေတယ်ဆိုလို့ ပါ.. စိတ်ဆိုးလို့လည်းမဟုတ်.. အကန်စကားပြောမလို့လည်း မဟုတ်ပါ.. တွေးကြည့်ရင်.. နတ်ပြည်မှာလည်း နတ်သားတစ်ပါးကို တစ်ဖက် နတ်သမီး ၅၀၀ နဲ့ စံကြတယ်ဆိုတာမျိုး၊ ဗိမာန်ပိုင်ရှင် နတ်သမီးတစ်ပါးဆိုလည်း အခြွေအရံက နတ်သားတွေမဟုတ်ဘဲ နတ်သမီးတွေသာဖြစ်နေတာမျိုး စာထဲဖတ်ဖူးတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မွေးသမျှက မိန်းမအင်အား အရမ်းများပုံပဲလို့ တွေးကြည့်မိတယ်.. ဒါကြောင့် နတ်ပြည်မှာလည်း မိန်းမတွေ၊ ငရဲပြည်မှာလည်း မိန်းမတွေချည်းဖြစ်နေတာလား မသိနော်.. ဆရာရေးထားတာနဲ့တော့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး.. တွေးမိတာလေး ၀င်ရေးတာသက်သက်ပါ..း)
dr.tin bo bo on January 25, 2010 at 10:25 am said:
နတ်သားတစ်ပါးကို နတ်သမီးတစ်ဖက်(၅၀၀)ဆိုတာ မူလ ပါဠိတော်မဟုတ်ဘူးလို့ ကျမ်းတတ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး ပြောဖူးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာခြင်း အတူတူ ယောင်္ကျားကျတော့ နတ်သမီး တစ်ဖက် (၅၀၀)တဲ့။ နတ်သမီးတွေကျတော့ နတ်သားတစ်ပါးကို ၀ိုင်းလုနေရတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ နတ်သမီးလည်း နတ်သား တစ်ဖက် (၅၀၀) ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ ဒါတွေဟာ မိန်းမတွေကို နှိမ်ချတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အယူဝါဒတွေ ရောဝင်နေတာလို့ ဆရာယူဆပါတယ်။ မိန်းမတွေကို နတ်ပြည်ရောက်တာတောင်မှ နေရာမပေးချင်တဲ့သဘောပါ။ ဆရာ့အယူအဆတော့ နတ်ပြည်မှာ “တစ်လင် တစ်မယား” စနစ်ဘဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နတ်တွေဟာ လူတွေလို “ဣသာမစ္ဆရိယ” မရှိဘူးလို့ ကြားဖူးတော့ နတ်သားတစ်ပါးကို နတ်သမီး (၅၀၀)ဆိုရင် နတ်လောကကြီးတစ်ခုလုံး “ဣသာမစ္ဆရိယ” တွေ ဗလပွ ထပြီး “လင်,လုပွဲကြီး” တွေ ဖြစ်နေကြမှာပေါ့။ မိန်းမဆိုတာမျိုးက “မုန့်သာဝေစားမယ်၊ အချစ်တော့ ဝေမစားနိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ အမျိုးမဟုတ်လား။ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
ချောစု on January 25, 2010 at 11:34 am said:
ကျော်စွာ on January 25, 2010 at 2:43 pm said:
YoungGun on January 25, 2010 at 3:07 pm said:
ဆရာရေ ဒီဆောင်းပါးတွေလဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လို ဗေဒင်ပညာမှာပဲ မွေ့လျော်ဦးမယ် တရားနဲ့ ဝေးနေဦးမယ့် သာမညောင်ညလေးတွေအတွက် ဟူးရားဗေဒင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဂဏန်းဗေဒင်ဟောကွက်တွေ ဖြစ်ဖြစ် ပညာပေး တင်ဆက်ပါဦးလို့။ ဗေဒ သုခုမ ဆိုတဲ့အတိုင်း အနုပညာမြောက်တဲ့ ဗေဒင်ဟောချက်တွေ၊ အယူအဆတွေလည်း ဖတ်ချင်ပါတယ်။ သာမန်လူတွေ နားလည်ချင်မှလည်မယ် ဒါပေမယ့် ပညာကို ပညာနဲ့ တူအောင် လိုက်စားသူတွေ ဦးနှောက်မုန်တိုင်းဆင်ရမယ့် ဆောင်းပါးမျိုးတွေလည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
dr.tin bo bo on January 25, 2010 at 5:41 pm said:
စိတ်ချပါ ကိုရန်း ရေ
ဗေဒင်ဆောင်းပါးတွေလည်း ရေးသွားမှာပါ။ ဒီဆောင်းပါးလေးက Post (၂)ခု ကျန်သေးလို့ စာရင်း ဖြတ်လိုက်ပါဦးမယ်။ ဒါပြီးရင် လာမှာပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမယ့် အခုဟာက “လောကုတ္တရာ တရား” မဟုတ်ဘူးဗျ။ လောကီထဲမှာ နေထိုင်ရင်း ပိုမို အဆင်ပြေချောမွေ့မယ့် ဘ၀ပုံစံတစ်ခု ကို လမ်းညွှန်ပေးနေတာသာဖြစ်တယ်။ တကယ့် တရားအစစ်က “လောကီ” ထဲက ခွာနိုင်မှ ရမယ်။ အခုက တရားသံတွေ ပါနေပေမယ့် “လောကီလမ်းညွှန်သာ” ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေစူး on January 26, 2010 at 10:14 am said:
သိကြားမင်းကတော့ တစ်လင်တစ်မယား စနစ်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော့် ဆရာ။4ယောက်တောင် ရှိတယ်လို့ ဖတ်ဖူးကြားဖူးလို့ပါ သန္တာအောင် on January 26, 2010 at 2:32 pm said:
ဆရာပြောတာသိပ်မှန်တယ် ကိုယ်ကို ကိုစစ်ကြည့်ရင်နဲ့ သိနေတာကြာပြီ ဆရာပြောသလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ တန်းတူလောက်လူတွေမှာမှ ဒီဟာကြီးကပေါ်တာ။ အဲဒါကို ခွာထုတ်တတ်ဖို့ အမြဲကြိုးစားတတ်ပါတယ်။
ဒေါသဖြစ်လာတာကို ချက်ချင်းသိတယ် ထင်လည်းထင်ရှားတယ် ဒါပေမယ် ချက်ချင်းတော့ရပ်လို့မရဘူး။ စိတ်လိုက်မန်ပါ စာရေးတယ် ရေးပြီးရင်မပို့ပဲ ခနလောက်ထားလိုက်တယ်။ နောက်မှ ပြန်ထပ်ဖတ်ပြီး မပို့ပဲထားလိုက်တယ်။ အဲနောက်မှာ ကိုမပို့လိုက်တာ သိပ်မှန်တာပဲဆိုတာ ပိုသိလာတယ်။
ကျေးဇူးပဲဆရာ ဆရာက စာရေးသိပ်တော်တယ်။ အကြိုးပြုစာတွေ ဒီထက်ပိုရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
chomaw on January 26, 2010 at 10:31 pm said:
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပြန် စောင့်ကြည့် နေတဲ့ “၀ိပဿနာ” အမြင်မျိုး လုံးဝမရှိသူတွေဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ သဏ္ဍန်မှာ “ဣသာမစ္ဆရိယ” ရှိ/မရှိကို လုံးဝ မသိကြ ပါဘူး။ အမှန်ပါ။ကိုယ်တွေ့ပါ
လဲ့ မွန်on January 26, 2010 at 11:05 pm said:
ဆရာရေ ဆရာ့ဆောင်းပါးလေးဖတ်မိတာ အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်ဆရာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ..
ko kyaw swe on January 27, 2010 at 12:23 am said:
သလို-အရင်တုံးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ဣသာမစ္ဆရိယထားခဲ့ဘူးပါတယ်။
အလုပ်ကို ကိုယ့်ထက်နောက်မှရောက်ပြီး ကိုယ့်ထက်သာသွားရင် မနာလိုဖြစ်
ခဲ့ပြီး၊ သူ့ကိုလည်းမကျေနပ် အခြားသူတွေကိုမကျေနပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုချိန်
မှတော့ အဲဒီစိတ်တွေမရှိတော့မဟုတ် ရှိသေးပါတယ်။ဒါပေမယ့် သိတဲ့အချိန်မှာ
တွေကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ထားလိုက်တာ ယခုဆိုရင်အလွန်မှအေးချမ်းမှု
တွေကိုခံစားလာရပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့တင်ပြချက်တွေဟာ အများပြည်သူ အတွက် အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါကြောင်း နောင်လည်း
ယခုလိုလောကီအကျိုး၊ လောကုတ္တရာအကျိုးရှိမဲ့ ဆောင်းပါးမျိုးဆက်လက်
ရေးသားပေးပါဦးလို့တောင်းဆိုပါရစေဆရာ။ ဆရာလည်းစိတ်၏ချမ်းသားခြင်း၊ကိုယ်၏ချမ်းသားခြင်းများ ခံစားရပါစေလို့
dr.tin bo bo on January 27, 2010 at 12:24 am said:
ko kyaw swe သို့
ကိုယ့်မှာ ဣသာမစ္ဆရိယ စိတ် ရှိဘူးတယ်လို့ ၀န်ခံရဲတဲ့ သတ္တိကို အလွန်လေးစားပါတယ်ဗျာ။ ဒီ စိတ်က လူတိုင်းလိုလို အနည်းနဲ့အများ ရှိတတ်ပေမယ့် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ၀န်မခံကြပါဘူး။ (နာမည်က အတော်ဆိုးတာကိုး)၊ ဆရာလည်း ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းလေး အောင်မြင်လာစမှာ အပြိုင်လုပ်ငန်းတွေပေါ်လာတော့ သူတို့အပေါ်မှာ ဣသာမစ္ဆရိယ ဖြစ်ဘူးခဲ့တယ်။ ကြော်ငြာပုံစံက အစ ထပ်တူခိုးချပြီး ဆင်တူရိုးမှားလုပ်ကြတော့ ဒေါသလည်း ထွက် ၊ ဣသာမစ္ဆရိယ စိတ်လည်းဖြစ်ပေါ့။ (၂)နှစ်လောက်ကြာအောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့မှ “ပင်လယ်ရေ တစ်ယောက်ထဲသောက်လို့မကုန်ပါဘူး” လို့ တစ်မျိုး။ သူတို့ ကိုယ့်ထက် “ပါရမီ” ကောင်းခဲ့ရိုးမှန်ရင်လည်း ကိုယ့်ထက်သာလိမ့်မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆုံးမရတယ်။ ကိုယ့်လောက် ပါရမီမကောင်းရင်တော့ ကိုယ့်ကို နိုင်စရာ မရှိဘူးလို့ ပြန်စဉ်းစားပြီး ကိုယ့်စိတ်ကို ဆုံးမရတယ်။
နောက်တော့ ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ ဒီ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို လိုက်တုပတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု “ပြုတ်” သွားကြတော့ စဉ်းစားကြည့်တယ်။ သြော် သူတို့က ငါ့လို “ထမင်းစားရရင် တော်ပါပြီဆိုတဲ့” စိတ်မျိုးမွေးပြီး လုပ်ကြတာမှ မဟုတ်တာ။ သူအောင်မြင်ရင် ငါတို့လည်း အောင်မြင်မှာဘဲဆိုတဲ့ “လောဘ” စိတ်ရယ်၊ “ဣသာမစ္ဆရိယ” “မာန” စိတ်တွေ နဲ့ စ,ပြီး လုပ်ခဲ့ကြလို့ ပျက်စီးကုန်ကြတာပါလား ဆိုတာ သဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် (၂)နှစ်လောက် “ဣသာမစ္ဆရိယ” ဖြစ်ခဲ့ရတာ “အကုသိုလ်” သာ အဖတ်တင်သွားပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ကိုယ့် “ဣသာမစ္ဆရိယ” စိတ်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သူ့တို့စေတနာ အတိုင်း အကျိုးပေး သွားကြတာပါ။
အခုအချိန်တော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို တုပလုပ်ကိုင်နေသူ ဘယ်သူတွေရှိမှန်းတောင်မှ ဂရုမပြုမိတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုဘဲ အာရုံစိုက် လုပ်နေပါတယ်။ စိတ်လည်း မ၀င်စားတော့ ဘူး။ ဂရုလည်း မပြုတော့ဘူး။
လူတိုင်း “အူဝဲ” ဆိုပြီး မွေးကတည်းက ဣသာမစ္ဆရိယစိတ်ကလေး ရင်မှာပိုက်ပြီး မွေးလာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှ ပေါ်တဲ့ စိတ်ပါ။ ဧည့်သည်စိတ်ကလေးပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဧည့်သည်မျိုးကို ရေရှည်လက်ခံထားရင် ကိုယ်ပါနစ်မွန်းတတ်တာကို သတိပြုကြစေလိုပါတယ်။
ယဉ်မျိုး on January 27, 2010 at 9:15 am said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ အသိပညာအများကြီး တိုးပွားရပါတယ်။
Mary on January 28, 2010 at 9:06 am said:
Thanks for this post sayar !
I am late to read your Life Style part4, because my house internet had problem, i can’t online since last Friday. Finally today i can use the internet. The first i visit the Website is your BayDaThuKhuMa. All your posts & articles give me knowledge , realize and improve the manners. Thanks again for all this sayar.
မအိနှင်းဖြူ on January 28, 2010 at 9:56 pm said:
sumyat on February 1, 2010 at 9:47 pm said:
ဆ၇ာဆောင်းပါးဖတ်၇တာသိပ်အကျိူး၇ှိတာပါဘဲ…ဣသာမစ္ဆရိယ စိတ် မဖြစ်အောင် သတိထားပြီးနေဆင်ခြင်ပါမယ်..ဒါပေမဲံ့ လောဘစိတ်ကတော့မလွယ်ဘူးဆ၇ာေ၇..ဖြစ်ချင်တာတွေကများနေတာ..
mamagyi on February 2, 2010 at 8:22 pm said:
zaw lat on February 2, 2010 at 11:13 pm said:
Thank you & I really respect your way of writing and way of thinking. Wish you the best.
လေနုအေး on February 10, 2010 at 12:16 pm said:
ပထဆုံးဆရာကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တော်တော်များများတိုင်ဆိုင်နေလို့ပါ။ ၀ိပသာနာအမြင်ကို ခွဲခြားပြီးမြင်နိုင်ရန် ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ ။တခါတလေတော့လည်း သူများကိုမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ကို ကို လောဘတတ်နေမိပါတယ်။ ဥပမာ ပညာရေးပါ။ ငါဘာလို့မရရတာလဲဆိုပြီး ။
bba on February 22, 2010 at 6:36 pm said:
thanks you very much,so precious post,good luck
ညခင်း on March 6, 2010 at 12:07 pm said:
“ဣသာမစ္ဆရိယ” စိတ်ဟာ အင်မတန်ဆိုးဝါးတယ်။ မုဒိတာ တ၇ားနဲ့ ဥပက္ခာတရားတို့နဲ့ ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်ဆိုတာပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
စိုးဝေထွန်း on May 5, 2010 at 3:56 pm said:
လူတွေကို သတိပေးတဲ့ စာတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီလိုစာမျိုးကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်
အသိတရား ဆင်ခြင်တတ်ကြမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာ အား
လုံး အေးချမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ လူကြီးလုပ်လိုသူများ ဖတ်ပြီး ကျင့်သုံးသင့်ပါ
တယ်၊၊ ၊၊ စာရေးသူကိုအထူး လေးစားပါတယ်
ကိုလင်း18 on October 22, 2010 at 11:26 am said:
အခု အသက်လောက်မှာ ဒီလို အကျိုးများတဲ့ တင်ပြချက်တွေ ပေးနိုင်တာ ကို ကြည့်ရရင်
တကယ် ဘယ်လောက်ခံခဲ့ရလဲ ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိပါတယ်၊၊
ကိုယ်ခံစား ပင်ပန်းခဲ့ ရသလို အများတကာ မပင်ပန်းစေ ချင် လို့
ရင်ဖွင့် တင်ပြရေးသား ထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
လိုက်နာလုပ်ဆောင် ရင် ပိုပြီး အကျိုး များမယ်ဆိုတာ လူငယ်တွေ ရော အားလုံးကိုပါ
ထိထိမိမိ သိအောင် တင်ပြပေးလို့ ပိုပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
ကေ on October 25, 2010 at 2:48 pm said:
တွေအတွက် တင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။
thang on July 2, 2011 at 6:11 pm said:
ဆ ၇ာ ၇ဲ့ စာ ကို ဖတ်တော့ ပညာ လည်း ၇ ကိုယ် လုပ် စ၇ာ အ များ ကြိး ၇ှိ တယ် ဆိုတာ သဘော ပေါက် ပါ ပြိ ဆ၇ာ ၇ယ်
Dawn on July 6, 2011 at 11:08 pm said:
နှမြောတွန့်တိုခြင်းကတော့ မလွတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်က စေတနာပါလို့ ပေးချင်ပြီဆို စားမယ့်အစာတောင်ပေးဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ဆိုင်တယ် ငါတို့ ရသင့်တယ် sense of entitlementရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ မပေးချင်ဘူးဆရာ။ ငရဲအိုးတော့ မြင်နေပြီ။ Tun Tun on September 3, 2011 at 11:49 am said:
ဆရာ့ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်မိပါတယ်.. သိသလိုလိုနဲ့ တကယ်လက်တွေ့မကျင့်သုံးမိ ဖြစ်နေတာတွေကို ဆရာက မီးမောင်းထိုး သတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ…
su on September 15, 2011 at 9:05 pm said:
face book မှာ share ခွင့် ပြူပါဆ၇ာ
Dr.Htet Aung Hlaing on September 21, 2011 at 2:30 pm said:
ဆရာခင်ဗျား… ဤသို့ ဆိုလျှင် လောဘ (လိုအင်ဆန္ဒ)များ
ချက်ပြည့်ဝအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူများအတွက်ကော ဆရာ။
ကျွန်တော်က ဆရာ့ထက်အများကြီးငယ်သေးတော့ အပြောအဆိုမှားသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ။
Dr.Tin Bo Bo on September 21, 2011 at 6:21 pm said:
လိုအင်ဆန္ဒများ ရှိနေခြင်းပင် လောဘရှိနေခြင်းဖြစ်၍ လောဘကို ပယ်သတ်သည်ဟု မဆိုနိုင်တော့ပါ။ ဘ၀မှာ ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝအောင် လုပ်နိုင်သူများ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မပြည့်ဝသူများက ပိုများတယ်။ (အရေအတွက်ခြင်း မယှဉ်နိုင်လောက်အောင်ကို များတယ်)
ရည်မှန်းချက်အတိုင်း အောင်မြင်သူများကို လေ့လာကြည့်လျှင် အနာဂါတ်ရှိ (အကျိုးတရားထက်) ၊ ပစ္စုပ္ပန်ရှိ (အကြောင်းတရား) ကို ခိုင်လုံအောင် လုပ်ကြသူများသာဖြစ်တယ်။ လူအများစုကတော့ အကျိုးတရားကိုသာ မျှော်ကိုးနေကြပြီး အကြောင်းတရားကို ခိုင်လုံအောင် မလုပ်ကြသူတွေက ပိုများကြတယ်။ ဒါကြောင့် အဆင်ပြေသော လူ့ဘ၀ မရနိုင်ကြတာဘဲဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ဆောင်းပါးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဘဲ။ ဆရာ့ဆောင်းပါးဟာ အသက်ငယ်လွန်းသူ (အသက် ၃၀) အောက်အရွယ်တွေ လက်ခံဖို့ ခဲယဉ်းတယ်ဆိုတာ ဆရာကြိုတွက်ပြီးသားပါ။ ဆရာတော့ ဘ၀ရည်မှန်းချက်ဆိုတာ မရှိခဲ့တာကြာခဲ့ပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ ဘ၀က တောက်လျှောက် အဆင်ပြေနေတာလဲ။ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ရည်မှန်းချက် (လိုအင်ဆန္ဒ)တွေကို ခေါင်းထဲက ဖယ်ထားပေမယ့် ဆရာ့မှာ နေ့စဉ် အလုပ်ရှိတယ်။ ဒီ တစ်နေ့စာ အလုပ်တွေကိုဘဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်(စေတနာ အပြည့်နဲ့) လုပ်နေတယ်။ တန်ရာတန်ကြေး ပေးနေတယ်။ မနက်ဖြန်ကို မစဉ်းစားဘူး။ အကြာင်းတရား ခိုင်လုံရင် ၊ အကျိုးတရားဆိုတာ အလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်တော့မှ မဖောက်မပြန် မှန်ကန်နေမယ့် “ဗုဒ္ဓရှင်တော်တွေ ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့” ကမ္ဘာ့ နိယာမကြီးဘဲ။ Cause Makes Effect Ever, Effect Makes Effect Never. တဲ့ ညီလေးရေ ။ ငါ့ညီရဲ့ အပြောအဆို မမှားပါဘူး။ သိချင်တာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးတာ ၀မ်းသာစွာကြိုဆိုလျှက်ပါ။ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။
တိုးအောင်လင်း on January 7, 2012 at 1:26 pm said:
အမှန်တကယ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့စိတ်ထားတွေပါ ယောကျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ဗဟုသုတလည်းအများကြီးရပါတယ် ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်မိတဲ့သူတိုင်းအကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတစ်ရာရရှိ
Thaw Tar on February 23, 2012 at 1:35 pm said:
ဆရာ အရမ်းကိုဗဟုသုတ ရစေတယ်
thwemar on March 30, 2012 at 2:23 pm said:
ဆ၇ာေ၇ ကျေးဇူးပါ ဒီဆိုက်ထဲကိုတခါတလေေ၇ာက်ပါတယ်
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,897)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,999)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,955)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,433)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,477)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,604)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,629)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,995)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,320)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,277)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,115)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,060)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,857)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,820)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,305)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,146)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,839)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,512)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,204)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,187)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,696)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,686)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,556)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,272)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,254)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,923)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,717)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,484)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,037)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !